Wabxo oo lala wareegay & wefdi tagey Galguduud | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Wabxo oo lala wareegay & wefdi tagey Galguduud
Wabxo oo lala wareegay & wefdi tagey Galguduud
Ciidamadda dawladda oo gacan ka helaya kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa shaaca ka qaaday inay la wareegeen Wabxo iyo tuullooyin kale oo hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolkaasi Galguduud, iyaga oo aan ilaa iyo imminka wax iska caabin ah kala kulmin xarakada Shabaab ee Soomaaliya.
Guddoomiyaha degmadaasi Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in maammulkiisa iyo saraakiisha ciidamadda huwantu ay baaritaanno ka wadaan Wabxo, wuxuuna sidoo kale ka codsaday shacabka inay kala shaqeeyaan soo celinta nabadda iyo ammaanka.
La wareegista Wabxo, ayaa qeyb ka ah hawlgalka ‘Badweynta Hindiya’ ee ka dhanka ah dagaalyahanka Al-shabaab.
Dhinaca kale, wefdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha gobolkaasi Galguduud, Xuseen Cali Weheliye ‘Cirfo’ ayna xubno ka yihiin guddiga maammul u sameynta gobollada dhexe qaarkood ayaa gaadhay magaalada Dhuusamarreeb, halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay.
Booqashada wefdigaasi, ayaa kusoo beegmaysa, xilli dhawaan heshiis lagu dhisayo maammul ay yeeshaan gobollada dhexe lagu gaadhay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Previous articleTuuryare waa taliyaha taliska NISA ee Soomaaliya
Next articleDawladda dhexe oo wadahadal la fureysa Puntland